Bambonge ngamaphuzu aphelele uMadlala abe-Arrows - Impempe
Bambonge ngamaphuzu aphelele uMadlala abe-Arrows
March 11, 2021 Impempe.com
Usihlalo weGolden Arrows, uMato Madlala
Inhloko yabaqeqeshi kwiLamontville Golden Arrows elokhu iqhubekile nokumangaza, uMandla Ncikazi, ichome usihlalo waleli qembu uMato Madlala uphaphe lwegwalagwala ngokuqinisekisa ukuthi amathuba okuwola amaphuzu eVenda aba yimphumelelo.
Abafana Bes’thende bahleli endaweni yesibili kwilogi yeDStv Premiership kulandela ukuqoqa kwabo aamaphuzu ayisithupha eLimpopo lapho beshayele khona ekhaya iBlack Leopards ngo 3-1 neTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) ngo 2-1.
Konke lokhu bekuzoba nzima ukuthi kwenzeke ngaphandle kokuqhubeka nokusondelana neqembu lakhe kukaMadlala oqashele iqembu lakhe indiza eyisipesheli ukuba iye eLimpopo ngaphandle kokuphazamiseka.
“Kusemqoka ukuthi ngiqale ngokubonga usihlalo wethu ngokusihlelela indlela enethezekile yokuya eLimpopo njengoba besinemidlalo emibili elandelana eduze khona.
“Ukusuka eThekwini uya eLimpopo akulona uhambo olulula kodwa usihlalo wethu usiqashele indiza eyisipesheli obekungeyethu kuphela ukuze sifike emdlalweni sisesimweni esifanele.
“Kungenxa yalezi zinhlelo zikasihlalo iqembu lifike lapha liphumule ngokwanele okufakazelwe imiphumela esibuye nayo kule midlalo emibili esiyigijime ngaphansi kwesimo sezulu esinzima.
“Angikungabazi ukuthi le miphumela itholakale ngenxa yalesi sinqumo sakhe usihlalo wethu,” kusho uNcikazi ohlale njalo emtusa uMadlala ngegalelo lakhe ekwenzeni izinto zibe lula kulabo (uMadlala) ebakhethele ukuba bamgadele umsebenzi.
Amagoli oKnox Mutizwa noSiboniso Conco okube iphenathi yiwona abeke i-Arrows endaweni yesibili lapho isele khona ngephuzu kwiMamelodi Sundowns eqhwakele yize isele ngemidlalo emithathu kwi-Arrows.
“Ngijabule ngendlela abadlali abakhombise ukuzinikela ngayo kunzima ngayo yonke indlela ongayicabanga.
“Kuhle konke yize kukhona lapho kusashoda khona (ngokwamaphuzu ebesizikalele wona ngokuhlukana kwezingxenye zesizini) kodwa ngineme. Amaphuzu ayisithupha eLimpopo akuyona into elula.”
UNcikazi usekhulekela ukuthi le njabulo nokuhlabana kwakulezi zinsuku baqhubeke nakho kuze kuyophela isizini.
“Ngithandazela ukuthi siqhubeke nalokhu kwenza kahle ngoba okwenzeke siqeda ukudla i-Q2 sibhekene neLeopards kukucacisile ukuthi siye kulo mdlalo nomqondo okungewona.
“Nginesifiso sokuthi kolandelayo neCape Town City siqhubeke nokwenza kahle futhi ngihlabeke umxhwele ngabadlali bami kodwa kusemqoka ukuthi bangazikhukhumezi.
“Ngiwumqeqeshi oneme kodwa oqaphile ukuthi injabulo yethu ayisivali amehlo ngoba isizini isaqhubeka futhi akukho okutheni esesikwenzile ngaphandle kokuba sefomini enhle. Isizini ayikapheli,” kusho uNcikazi sakuxwayisa.
Previous Previous post: Babehlunga amazambane abolile bededela abadlali kwiMaritzburg?
Next Next post: Akayizwa eyokulahlekelwa uJali kwiSundowns uMngqithi